के भएर थलिए ओली ? के हुँदैछ ? « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । कडा खालको झाडापखालाले अस्वस्थ बनेका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तंग्रिन थालेका छन्। तीन दिनअघि उनलाई झाडापखाला भएपछि पूर्वनिर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि अनुपस्थित रहँदै आएका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
सोमबारदेखि अस्वस्थ रहेका ओलीलाई झाडापखालाले तीन दिनसम्म बेस्सरी च्यापेको थियो। ओलीका निजी चिकित्सक प्राडा दिव्यासिंह शाहले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘उहाँ ९ओली० को पेट अलि गडबडी भएको हो। अहिले ठिक छ।’
मिर्गौला र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखापरेपछि यसअघि ओलीले नेपाल साथै भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरमा समेत उपचार गराएका थिए। खानपानमा सजगता नअपनाउँदा ओली झाडापखाला लागेपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत नगई घरमै आराम गरिरहेका थिए।
काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीमा थप गर्न लागिएका तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) दरबन्दीमा गृह मन्त्रालय र अर्थ
काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनुअगावै गर्न तयार भएका छन्
वीरगन्ज । मध्य तराईमा दिन प्रतिदिन चिसो बढ्दै गएपछि यहाँको जनजीवन अप्रत्यासित रूपमा प्रभावित भएको
बढी यात्रु राख्नेमाथि धमाधम कारबाही
काठमाडौं । कोभिड–१९ तथा यसका नयाँ भेरियन्टको रोकथामका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक यातायातका